जीवनमा जाेसँग प्रेम गरें, उनैसँग विवाह गरें
By कल्पना शर्मा on	 २७ मंसिर २०७३, सोमबार १३:५२ · विशेष
दीपक मल्होत्रा, अध्यक्ष, आईएमएस
व्यापारी मान्छे, व्यापार गर्दैछु ।
नेपालमा अहिले लगानीको वातावरण छ की छैन ?
लगानी दुई किसिमको हुन्छ । एउटा उद्योग, अर्को व्यबसाय । उद्योगमा त जिरो भन्दा हुन्छ । लगानीको वातावरण १ प्रतिशत पनि छैन । व्यबसायमा पनि खासै सन्तोषजनक अवस्था छैन । यसका मूख्य तीन कारणहरु छन् । एउटा लोडसेडिङ, अर्को ट्रेड युनियन र तेस्रो राजनीतिक अस्थिरता । लोडसेडिङका कारण देशले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ । भएका उद्योगधन्दाले पनि राम्रोसँग काम गर्न पाएका छैनन् भने नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्ने आँट पनि उद्योगीहरुले राख्न सक्ने अवस्था भएन । सबैभन्दा पहिले त ट्रेड युनियन बन्द गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता भएको मान्छे हुँ म । देशको मूल कानुनअनुसार नै सबै अघि बढ्नुपर्छ । ट्रेड युनियनका नाममा हामीकहाँ काम नगर्ने परिपाटीका कारण पनि उद्योगी, व्यबसायी हतोत्साही भएका हुन् । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको आज एउटा नीति बन्छ यो कार्यान्वयन हुन नपाउँदै अर्को सरकार फेरिन्छ । राजनीतिका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ । सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ नीति आउँछ अनि कर्मचारी पनि परिवर्तन हुन्छन् । त्यसपछि सारा प्रणालीनै परिवर्तन हुँदै जान्छ । यी मूख्य तीनवटा कारणले उद्योगमा लगानी गर्न समस्या छ र वातावरण छैन ।
पछिल्लो समयमा सामसुङ मोवाइलमा समस्या आएका समाचारहरु पनि आए, यसले राम्रो ब्राण्डको कम्पनीलाई असर पर्दैन ?
योे एकदमै झुटो समाचार हो । अहिलेको समयमा नयाँ नयाँ फिचर भएका मोवाइलमा नयाँ कुरा नल्याइकन विक्री हुदैन । नयाँ आउने मोवाइलमा सुपर फास्ट चार्जिङ्ग छ । त्यसमा केहि त्रुटी हुन गएकोले चार्ज गर्ने क्रममा हिट भएर पग्लीएको मात्र हो । यसलाई अनावश्यकरुपमा हल्ला फिजाएर पड्कियो भन्नेसम्मका कुरा आए । सामसुङ मोवाइल बाहेक अन्य कुनै साधारण ब्राण्ड मोवाइल भए यतिको हल्ला हुँदैन थियो ।
प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा सामसुङका प्रतिद्धन्दीहरुले बढी हल्ला गरेका हुन् । नेपाली बजारमा हामीले यो मोवाईल भित्राई नसकेको कारण समस्या भएन । बाहिर केहि ठाउँमा समस्या आएको हो । यो अरु केहि नभएर ठूलो कम्पनी भएका कारण प्रतिद्धन्दीले बद्नाम गराउने उदेश्यले यसो गरेको प्रष्टै हुन्छ तर सामसुङ कस्तो प्रकारको कम्पनी हो भन्ने बारेमा हाम्रा ग्राहकलाई भनिरहनै पर्दैन । असर पार्न खोजिएको पक्कै हो तर पड्कियो नै भनेर गलत हल्ला फैलाउन खोजेको सबैलाई थाहा भईसकेकोले कम्पनीलाई असर पर्ने कुरै आउँदैन ।
भारतमा अहिले ५ सय र हजारका नोटमाथि प्रतिबन्ध लागेको छ यसले नेपालमा कस्तो असर पार्छ ?
म नियम कानून मान्ने मान्छे हुँ । भारत सरकारले ५ सय र हजारका नोटमा जून प्रतिबन्ध लगाउने काम गर्यो त्यो एकदमै सकारात्मक कदम हो । किनभने भारतको अर्थतन्त्रमा नक्कली नोट र दुई नम्बरी नोटका कारण असर देखा परेको थियो । ती नक्कली नोट र कालोधन्दा बन्द गराउनकै लागि प्रधानमन्त्री मोदीले यस्तो कदम चालेका हुन् । जसले सहीरुपले पैसा कमाएका थिए र घरमा राखेका थिए उनीहरुलाई अप्ठेरो नपार्ने काम पक्कैपनि सरकारले गर्नेछ । तर केहि समयका लागि भने असरै पर्छ की जस्तो पनि हामीलाई लागेको थियो । तर पछि बुझ्दा असर त्यस्तालाई पर्छ जसले बद्मासी गरेका छन् ।
समाज सेवामा पनि आवद्ध हुनुहुन्छ रे हैन ?
समाज सेवाको हिसाबले हाम्रो एउटा क्लब फिप्टी नामक संस्था छ । म त्यसमा आबद्ध छु । सो संस्थामा ५० बर्ष नाघेका सदस्यहरु छौ । क्लब फिप्टीको मूख्य उदेश्य भनेको समाजमा सेवा गर्ने हो र हामीले हरेक वर्ष ५÷६ वटा महत्वपूर्ण कामहरु गर्छौं । स्वास्थ्य जाँच देखि स्कूलहरुमा अनुदान र यसको रिसर्चहरु पनि हामी आफै गर्छौं । हाल यसको अध्यक्ष म छु । यो बाहेक पनि मेरो डीएम फाउन्डेशन छ । यस अन्तरर्गत हामीले अति मेहनती विद्यार्थीहरु, जो भविष्यमा डाक्टर बन्न चाहान्छन् तर उनीहरु आर्थिक कारणले पढ्न नसक्ने अवस्था छैन । त्यस्ता विद्यार्थीहरुलाई हामीले छात्रा वृत्ति दिएर पढाई रहेका छौं ।
जीवनमा सबैभन्दा बढी खुसी भएको कुनै क्षण छ ?
सोचेको कुरा पूरा हुँदा मलाई एकदमै खुसी हुन्छु । जीवनमा धेरै छन् खुसीका क्षणहरु । त्यसमध्ये पनि प्लेन दुर्घटनाबाट बाँच्न सफल भए । मैले नयाँ जीवन पाए । त्यो जीवनमा सबैभन्दा खुसीको क्षण थियो ।
वैवाहिक जीवनमा प्रेमले कस्तो अर्थ राख्छ ?
मेरो जीवनमा मैले एकै जनासँग प्रेम गरे । उनैसँग विवाह गरे । अहिलेसम्म हामी सँगै छौं । बिना प्रेम विवाह गर्दा भन्दा एक अर्कालाई बुझेर जानेर अघि बढ्दा जीवन प्रेममय हुन्छ । यो अति आवश्यक चिज हो । प्रेम हुन सकेन, भएन भने अनेक किसिमका समस्या आउन सक्छन् । बैवाहिक जीवनमा प्रेमको अति महत्व छ । प्रेम भएन भने सम्बन्धहरु बीच बाटोमैं टुङ्गिन्छन् ।
केही मानिसहरुले वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएपछि पे्रमको खासै अर्थ रहन्न जति बिवाह अघि रहन्छ पनि भन्छन् नि ?
मान्छेको आआफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ । एकथरीले घट्छ भन्छन् । अर्कोथरीले बढ्छ । मेरो विचारमा प्रेम सम्बन्धमा प्रेममात्रै हुन्छ, जिम्मेवारी हुँदैन । जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने भएपछि मानिसमा पहिलेभन्दा केहि परिवर्तन आउँछन् । तर प्रेममा कुनैपनि कमी आउँदैन । यदि कमी आयो भने समस्या पनि सँगै आउँछ । त्यसैले बिवाह अघि भन्दा पछि प्रेमको अर्थ विशेष हुन्छ ।
तपाईको बिवाह भएको थुप्रै समय भयो, बेला बेला असमझदारीहरु पनि हुन्छन् होला नी ?
मेरो विवाह भएको ३५ वर्ष भयो । हाम्रो जीवनमा एकअर्कासँग ठूलो असमझदारी अहिले सम्म आएको छैन । हामीकहाँ महिलाहरु श्रीमान्सँग रिसाएपछि सबैभन्दा पहिले माईती जाने चलन छ । यतिका वर्ष भयो हामी अर्कासँग जोडिएको, तर मेरी श्रीमती असमझदारी बढेर माईती गएको घटना छैन । कहिलेकाहिं सामान्यरुपमा एकअर्काको कुरा चित्त बुझ्दैन । यो स्वभाविक पनि हो । सम्बन्धमा ठाकठूक पर्छ नै । असमझदारी होलान् तर समस्या भने अहिलेसम्म आएको छैन ।
तपाई व्यापारी मान्छे, पैसाको महत्व वुझ्नुहुन्छ तर मानिस सुखी रहन जीवनमा अनिवार्य कुरा के हो ?
सुखी जीवनका लागि धेरै कुरा आवश्यक पर्छ । म व्यापारी भएपनि पैसालाई मात्र सुखी जीवनको आधार मान्दिन । पैसा कमाएर मेरो परिवारलाई सुखशान्ति भएन भयो भने त्यसको के अर्थ भयो र ? पैसा बिना आजको जीवन संभव छैन । तर जीवन सुखी हुन सबैभन्दा पहिले परिवारको खुसीले महत्व राख्छ ।
म भगवानलाई विश्वास गर्छु । मेरो भगवान्प्रति ठूलो आस्था छ । तर दिनदिनै पूजाआजा भने गर्दिन । विहान उठेर घरमैं एक्सरसाईज गर्छु । ११ बजे खाना खान्छु त्यसपछि अफिस आउछु । भेटघाट तथा कार्यालयको काममैं बित्छ दैनिकी ।
जीवनको परिभाषा व्यक्ति अनुसार फरक फरक होला । जीवन भगवानले दिएको सबैभन्दा सुन्दर उपहार हो । जीवन आफ्ना लागि मात्रै नभई अरुको लागि पनि हो । मानिस धर्तीमा आईसकेपछि समाजले सम्झनलायक काम गरेर जानुपर्छ ।
रुचीको विषय के हो ?
मेरो रुची भनेको घुम्ने हो । अहिलेसम्म विश्वका विभिन्न ठाउँ पुगें । अफ्रिका, रसियन देशहरु जान पाएको छैन, काम विशेषले । समय मिल्यो भने ती ठाउँहरु चाँडैनै पुग्ने विचार छ ।
हालसम्म कति ओटा देश घुम्नु भा’ छ ?
२२ देखि २५ वटासम्म घुमें होला ।
सवैभन्दा मनपर्ने देश कुन हो ?
अमेरिका मनपर्छ । त्यहाँको कानून एकदमै कडा छ । यसले गर्दा त्यहाँका मानिस अनुशासित छन् । अमेरिका देश धनी छ तर जनता गरीब छन् । जनता भोकाए, बिरामी भए वा कुनैपनि समस्या भयो भने सरकारले हेर्छ । तर हामीकहाँ ठ्याक्कै उल्टो छ । देश गरीब सीमित नेता धनी छन् । जनता भोकै मरेपनि नेतालाई कुनै पीर छैन । तर अमेरिकामा जनताप्रति राष्ट्र र नेता खुबै सचेत छन् । त्यहि कारण आफू घुमेका मध्ये सबैभन्दा बढी मनपर्ने देश अमेरिका नै हो ।
मनपर्ने चाड कुन हो र किन ?
बच्चामा तिहार राम्रो लाग्थ्यो । अहिले दशैै मनपर्छ । उमेर ढल्कदै गएपछि भने दशै मनपर्न थालेको हो । दशैंमा आमा, बाबा, दाजुभाई दिदी बहिनी लगायत सम्पूर्ण परिवार सँग भेटघाट गर्ने अवसर मिल्छ । अन्य चाडमा संभव छैन । दशैंमा जति लामो विदा अरु कुनै चाडमा हुँदैन । आजभोली सबैभन्दा रमाइलो र मनपर्ने दशैं नै हो ।
अहिले काठमाडौंमा लोडसेडिङ्ग घटेको छ । यसले नयाँ खुसीको सञ्चार गरेको छ । उर्जा मन्त्री जर्नादन शर्माको सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । छिटो भन्दा छिटो नेपालमा लोडसेडिङ्ग अन्त्य गरेर सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई समुन्नतिको मार्गमा हिंडाउन उहाँहरुले थाल्नुभएको प्रयास केहि समयको लागि होईन सदाको लागि होस् । शुभकामना ।
अन्तर्वार्ता, कल्पना शर्मा
फोटोग्राफी, रश्मी महत